कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बालबालिकालाई कति सान्दर्भिक ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बालबालिकालाई कति सान्दर्भिक ?
२६ जेष्ठ २०७८ बुधबार १९:२५
बालबालिकाहरुलाई विभिन्न रोग विरुद्ध पहिलेदेखि नै खोप लगाउने गरिएको छ । पोलियो डिपथेरिया, मेनेन्जाइटिस लगायत बालबालिकालाई लगाइने खोपहरुको लामो सूची छ, जुन जन्मिएको केही साताबाट लगाउन शुरु गरिन्छ । त्यसो भए कोभिड–१९ विरुद्धको खोपा चाहीँ लगउन मिल्ला कि नमिल्ला ? केही देशले यो प्रकृयालाई निकै अगाडि बढाइ सकेका छन् । त्यसमा १२ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका छन् उनीहरुले यो उमेर समूहको परिणाामलाई हेरेर अर्को वर्ष अझ कम उमेरका बालबालिकामा पनि खोप लगाउने योजना बनाएका छन् ।
यो प्रकृयामा बेलायत पनि अघि बढ्दै गरेको छ । बेलायतले अर्को महिनासम्म सबै उमेरका नागरिकलाई खोप लगाउने जनाएको छ । बालबालिकालाई खोप लगाउने नलगाउने भन्ने बारे स्पष्ट पारेको छैन तर यहाँ एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ किन पनि छ भने देश अनुसार जवाफ पनि फरक भेटिन सक्छ । यस प्रश्नको नैतिक एवम् व्यवहारिक आयाम पनि छन् । यदि बालबालिकालाई दिइने मात्रा स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य गरिव देशका जोखिममा रहेका नागरिकलाई दिइने हो भने अरु धेरै जीवन बच्न सक्छ ।
बालबालिकालाई खोप लगाइदा त्यसबाट उनीहरुले थोरै मात्रै फाइदा पाउँछन भन्ने तर्क धेरैको छ । कोभिड–१९ को पहिलो एवम् दोस्रो लहरमा रोगका समुदायमा देखिएको प्रकृति अनुसार हेर्ने हो भने भाग्वस निकै कम मध्येको एउटा राम्रो विषय कोभिड–१९ बाट बालबालिका विरलै मात्र कम विरामी भएका छन् । बेलायतले बनाएको भ्याक्सिन एवम् इम्सुनाइजेशन समितिका सदस्य प्राध्यापक आदम फिन भन्दछन् बालबालिकामा देखिएको संक्रमण निकै सामानय वा कुनै लक्षण विनाको हुने गरेको छ । जुन बालबालिका भन्दा ठूलो उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा देखिएको असर भन्दा ठीक उल्टो हो । बालबालिका भन्दा ठूलो उमेरका व्यक्तिहरुमा कोभिड–१९ भाइरसको असर गम्भीर देखिदै आएको छ । त्यसैले प्राय देशहरुमा खोप लगाउने कार्यक्रममा पनि उनीहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वैश्विक स्तरमा सात देशमा गरिएको एउटा अनुसन्धानले यो महामारीमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित बालबालिक मध्ये प्रत्येक १० लाख मध्ये २ वा त्योभन्दा कम बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । खोप यस्ता संक्रामक रोगका लागि साँच्चिकै निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि त्यसको फाइदा पूर्णरुपमा लिनका लागि उत्तिकै विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
बालबालिकालाई खोप लगाउनुको अर्को सम्भावित फाइदा भनेको यसले अन्य व्यक्तिको जीवन बचाउन सक्नेछ । यसअघि यस्तै प्रकृतिको समस्यामा पनि प्रयोग गरिएको विधि पद्धति हो । बेलायतले दुईदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाकबाट एउटा स्प्रे दिने गरिएको छ जस्ले कुनै पनि संक्रामक फ्लुबाट उनीहरुका अभिभावकलाई बचाउने गर्छ । यसैमा आधारित भएर एउटा तर्क गरिएको छ कि बालबालिकालाई समेत खोप लगाइदा समुदायकृत प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा मद्दत पुग्नेछ । यसरी पनि सुरक्षित बन्न सकिन्छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पनि संक्रमण रोक्न निकै प्रभावकारी देखिएको छ । पहिलो मात्राको खोपले मात्रै पनि भाइरस संक्रमणको सम्भावना आधाले घटेको देखिएको छ । संक्रमण भइहाले पनि अर्को व्यक्तिमा फौलाउने सम्भावना कमै हुने गरेको देखिएको छ ।
लेखक डा. केदार कार्की
अहिलेसम्म बालबालिकाहरु संक्रमण फैलाउनेमा देखिएको छैन । यद्यपि ठूला उमेरका बालबालिका भने संक्रमण हुने र संक्रमण फैलाउने सम्भावना केही बढी हुने देखिएको छ। माध्यमिक तहका बालबालिकामा संक्रमण हुने र फैलाउने सम्भावना रहेको प्रमाण भेटिएका छन् । लण्डन स्कुलका प्राध्यापक आदम कुचास्की अनुसार बालबालिकालाई पनि खोप लगाइदिने हो भने संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुनेछ । युनिभसिटी अफ क्यालिफोर्निया, सानफ्रान्सिसको की सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ मोनिका गान्धीका अनुसार पनि खोपले उत्पादन गर्नै रोग प्रतिरोग क्षमताले हालसम्म विश्वमा थाहा हुन आएका सबै प्रकारका कोभिड–१९ भेरिएण्ट विरुद्ध काम गर्न सक्दछ । खोपका क्लिनिकल परीक्षणहरु र खोप लगाएपछि देखिएको संक्रमणको प्रवृक्ति हेर्दा खोपले संक्रमणलाई रोक्न सक्ने र संक्रमण भएमा अस्पताल हुनुपर्ने जोखिमहरु निकै घटाएको देखिन्छ । खोप लगाएकाहरुको मृत्युदर नलगाएकाहरुको भन्दा निकै कम हुने अध्ययनहरुले देखाएको छन् ।
अहिले प्राप्त खोपहरुले भाइरसले निम्त्याउने रोगको जोखिमलाई कम गर्न सक्दछन् भन्नेमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरु बीचमा मतभेद छैन । संक्रमण भइहाले पनि अहिलेका खोपहरुले मृत्यु हुनबाट जोगाउने अथवा अस्पताल भर्ना हुन बचाउने भाइरोलोजिष्ट जेरिमी कामीलको तर्क छ । उनले बिबिसीसँग भनेका छन्; ”कृपया तपाइले जुन खोप पाउनुहुन्छ त्यही लगाइहाल्नुस् कुनै अर्को खोपको पर्खाइमा नबस्नुस किनभने हिजो बाँचेका थियौं र पो आज छौं आज बाँचे पो भोली रहौंला नत्र कस्ले देखेको छ कि भोली बाँचौंला । कोभिड–१९ को महामारीको बेला आफू पनि बाँचौ अरुलाई पनि बचाऔं सम्भावित उपायहरु अपनाएर ।”
(लेखक भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका सेवानिवृत्त प्रमुख पशु चिकित्सक हुन्)
गोली प्रहार गरि सुनचाँदी पसलमा डकैती, ५ जना घाइते, १० लाख बराबरको लुटपाट
स्वीजरल्याण्डलाई ३–० ले पराजित गर्दै नकआउट चरणमा पुग्यो इटाली